PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - Kudingeke ahlale ehostela ecwaninga umbhali
Kudingeke ahlale ehostela ecwaninga umbhali
KUDINGEKE ahlale izinyanga eziyisishiyagalolunye ehostela KwaMashu ukuze athole ingonyuluka ngaphambi kokubhala incwadi umcwaningi obuye afundise emanyuvesi.
UDkt Nomkhosi Xulu-Gama (36), obethula incwadi ethi Hostels in South Africa, kuleli sonto, uthe akubanga lula ukujwayela impilo kule ndawo kodwa bekudingeke athole lonke ulwazi ngayo. Akagcinanga ngokuhlala ehostela kodwa kudingeke avakashele nezindawo zasemakhaya ukuyoxoxa nabanye ababehlala emahostela.
“Ngikhulele elokishini, eNanda Newtown A, angiyazi nhlobo impilo yasemakhaya. Bengiqala ukuhlala emakhaya ngoba sengenza ucwaningo. Ngivakashele imindeni eyahlukene eShowe, KwaNongoma, Mpangeni naKwaHlabisa. Bengihlala isonto elilodwa emndenini ngamunye,” echaza.
Okumenze wabhala ngalesi sihloko ukuthi ubecwaninga ngaso ngesikhathi enza iPhd emkhakheni weSocial Science. Uthe bekudingeka acwaninge ngobandlululo, wabona ukuthi kungcono akhethe amahostela ngoba ayingxenye yezinhlaka zobandlululo. Yize le ncwadi ikhuluma ngamahostela, uthe ifana neyomlando ngoba kuningi akhuluma ngakho obekwenzeka kusukela ngezikhathi zobandlululo nangokungena kwentando yeningi.
Yize kulezi zinsuku uma kukhulunywa ngamahostela zingasali izigameko zokubulalana, uDkt Xulu-Gama uthe akagxilile kukona.
“Inhloso bekungekona ukuveza ukubulawa kwabantu emahostela kodwa ngiyangena kancane kukhona. Ngigxile ekutheni bebelethwa yini abantu emahostela nokuthi uhlelo luhamba kanjani. Ukubulalana kungena ngoba abanye basuke sebebanga izindawo zokuhlala,” kusho yena.
Kumthathe iminyaka emibili ukuhlanganisa ucwaningo ngale ncwadi. Uthe ngesikhathi ebhala le ncwadi okungeyokuqala yakhe, ubephushwa uthando lokucwaninga kodwa umangele indlela abantu abayithakasele ngayo. Uthole izinkampani eziningi zabashicileli zifuna ukuba yingxenye yokwethulwa kwencwadi esitholakala ezitolo.
UDkt Xulu-Gama onoxhaxha lweziqu zemfundo ezinye azithola phesheya, uthe bekungelula ukubamba izincwadi nomendo. Washada ngo-2011 evele eseqalile ukwenza iPhd. Wathweswa iziqu esekhulelwe, walamanisa kabili iminyaka ilandelana njengoba enezingane ezintathu ena-3, 4 no-5.
UDkt Xulu-Gama oseyiSenior Researcher eChris Hani Institute, uthe usahlabe ikhefu emfundweni kodwa usefuna ukuthuthukisa abanye. Phambilini ubengumcwaningi eDurban University of Technology kanti uke wafundisa nase-University of KwaZulu-Natal (UKZN).
IPhd wayithola e-University of Cape Town ngo-2012. Ezinye iziqu anazo kubalwa iPost Graduate Diploma in Higher Education e-UKZN, Master’s neHonours Degree in Social Sciences e-Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg eGermany. Uke wafunda naseJawaharlal Nehru University, e-India nase-University of California Berkeley, United States of America.
UBEFUNA ihlabahlose incwadi yakhe yokuqala ekhuluma ngamahostela uDkt Nomkhosi Xulu-Gama okudingeke ahlale khona izinyanga eziyishiyagalolunye khona ecwaninga
oyisa eScottburgh. UCol Mtolonza ndawonye eMzimkhulu, amasu